Mahila Swasthya जानि राखौँ ! बिहान गरीने सेक्सका यस्ता फाइदा
जानि राखौँ ! बिहान गरीने सेक्सका यस्ता फाइदा
शारीरिक सम्पर्क मानिसको जीवनको एक नभई नहुने कुरा हो ।
यसलाई निकै सही तरिका र सही समयमा गर्न सके एक विवाहित जोडीलाई यसले निकै नै आनन्द र सुख दिने गर्छ । तर, सेक्सको सबैभन्दा राम्रो समय कति बेला होला भन्ने प्रश्न धेरै जसोको मनमा आउन सक्छ । खोजकर्ताहरुले गरको एक खोज क अनुसार स्वास्थ्यका हिसाबले शारीरिक सम्पर्क गर्ने सबभन्दा राम्रो समय बिहान हुन्छ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार यदी बिहान साढे ७ बजे सेक्स गर्ने हो भने मानिसको पुरै दिन निकै राम्रो हुने शरिरमा फुर्ती आउने काम गर्न जाँगर लाग्ने गर्छ। बिहान उक्त समयमा सेक्स गर्दा दुवैलाई थकाई नलाग्ने र निकै संवेदनशिल हुने गर्छन्। यस समयमा अन्य समयमा भन्दा सेक्स हर्मोन धेरै उत्पादन हुने ठहर समेत अनुसन्धानले गरेको छ।